Banyere Anyị - Shenzhen GK Group Co., Ltd.
Anyị na-enye ndị ahịa anyị ahụmahụ ịzụ ahịa dị mfe ma dị irè.Saịtị anyị bụ enyi na enyi nke mere na ọbụna onye na-azụ ahịa na-ahụ maka teknụzụ kacha nta nwere ike ịga site na nchọ ngwaahịa gaa na ndenye ọpụpụ na-enweghị mgbagwoju anya.Anyị na-emeziwanye webụsaịtị anyị mgbe niile na mbọ iji melite ịdị mfe iji.
Ahụmahụ ọrụ ndị ahịa dị anyị ezigbo mkpa.Anyị na-agbalị ịhụ na ndị ahịa na-100% afọ ojuju na ngwaahịa anyị na mgbe-ahịa ọrụ.Anyị na-enye nkwado na-akpaghị aka site na email ma nwee olileanya ịnata email gị.
GK bụ ụlọ ọrụ ikike na ụlọ ahịa Windows.Enyere anyị ikike ireghachi ngwaahịa ndị achọtara saịtị anyị.Dị ka onye na-ere ere ikike, anyị na-enweta ọzụzụ na mmelite kwa oge iji hụ na ndị ọrụ anyị dị ọhụrụ ma dị njikere inyere ndị ahịa anyị aka n'ụzọ ọ bụla.
Ngwanrọ ego akwụ ụgwọ bụ ihe ejiri mara anyị nke ọma.Anyị na-enye ihe niile ọkacha mmasị gị ụlọ ọrụ na-eduga software na kasị asọmpi na ọnụ ahịa.Kedu ihe kpatara ịkwụ ụgwọ azụmaahịa zuru oke mgbe ị nwere ike zụta ngwa ngwa ị chọrọ na ọnụ ahịa mbelata nke ukwuu?Anyị na-edobe ọnụ ahịa asọmpi dị ukwuu ma na-enyocha ha mgbe niile iji na-ejere gị ozi na nnukwu azụmahịa kwa ụbọchị.
Nzuzo gị dị anyị ezigbo mkpa.Anyị na-eji oke ndokwa iji kpuchido ozi onye ahịa anyị ma n'ịntanetị na n'ịntanetị.Anyị bụ saịtị echekwara ma jiri teknụzụ kachasị elu na-enye nchekwa kacha mma enwere ike.Ebe anyị nwetara asambodo SSL yana ezoro ezo nke ọma, yabụ ozi gbasara gị na ịkwụ ụgwọ ga-abụ nke echekwara kpamkpam.